अस्तित्वको सम्मान « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2017 April 27, 4:40 pm
दुर्गा न्यौपाने : जब म जन्मे, बेनाम जन्मे । न हरमा लुगा न मनमा चिन्ता । केवल थिएँ, एक मानव आकृति । हुन त म मात्र कहाँ हो र ? हरेक मान्छे म जस्तै गरि जन्मन्छन् । नाङ्गै अनि खाली । तर समयसँगै मान्छे अनेकौं लुगा बदल्छ अनि विस्तारै भरिन्छ, खाली नहुनको लागि । मान्छे जसरी भरिदैं जान्छ, ऊ त्यस्तै बन्दै जान्छ । धेरै मान्छेहरुमा केहि मात्रले आफूलाई रित्याउँछन् बाँकी सब भरिएरै जान्छन् । आफूलाई रित्याउन कहाँ सजिलो छ र ? अत्यन्त कठीन कार्य हो यो । आफूलाई खाली बनाउँन नसक्दा कोहि यत्तिकै सकिन्छन् । कोहि पागल हुन्छन् भने कोहि अपराधि । तर म न पागल भएँ न अपराधि नै बनें । मान्छे जन्मेपछि मर्छ एकदिन । म पनि मरुला । मर्ने कुरा प्राकृतिक कुरा हो न कि सामाजिक । मान्छेले यसलाई किन सामाजिक बनाए ? आजसम्म बुझ्न सकेकी छैन । कसैले बुझाएको पनि छैन । मान्छेहरु बुझ्न पनि खोज्दैनन् । चुपचाप बस्छन् ।
जब म सधुवा थिएँ, मलाई थाहा थिएन बिधवाको व्यथा । साँचो रहेछ नमरी स्वर्ग देखिदैन भनेको । मैले पनि देखिन । हुन त त्यस ताका कहाँ थिए र आजकलका जस्ता अभियान र कार्यक्रम ? सबै आवाज दविएका थिए । सुसुप्त थिए । त्यति जागृत थिएनन् । विधवाका आवाज विलाउँथे हावामा । विधवाकै मनभित्र विशाल आँधि बनेर गुडुल्किएर बस्थे, बाहिर निस्कन नसकेका आँधि, तुफान र चक्रवात । बाहिर आएको भए सायद सुनामी बनेर आउँथ्यो । त्यो उकुसमुकुस पृथ्वीको गर्भमा भएको लाभा जस्तै गरि विधवाका भित्र हुन्थ्यो । त्यसो त आजकल छैन पनि हैन । तर अचेल बेला बेलामा ज्वालामुखिको रुपमा छिटफुट कहिं कहिं धर्ती चिरीएर निस्कन्छ । र निस्कन्छ कि भन्ने चेत झिनो रुपमा नपसेको पनि हैन ।
विशाल आकाशले थिच्यो उठ्नै नसक्ने गरि । म विधवा भएको दिन । लाग्यो, म बाहेक कोहि छैन विधवा । मेरो मुखभरि कालो पोतियो । म कुमान्छे भएँ । अलिछिना भएँ । राणी भएँ । जुन गाउँ घरका जनजिब्रोमा गाली बनेर बर्षन्थ्यो । सुन्न पनि गाह्रो हुने शब्द थियो त्यो । आफैंमाथि बज्रने भयो अब । पोई टोकुवाई भन्लान् सबैले । यस्तै यस्तै लहर आए मेरो मनका समुद्रमा । रङ्गहिन भएँ म । रातो रङ्गको कुनै प्रवाह नभएकी म, त्यो दिनदेखि ताजा भएर रातो रङ्ग आँखामा सल्बलाउन थाल्यो । कहिं रातो सारी बनेर । कहिले रातो टिका बनेर । रातो रङ्गले कल्पना रातै हुन्थ्यो । तर आँखा रोएरै राता हुन्थे । बिझाउँथे हेर्नै नहुने गरि । चैतको डँढेलो जस्तै फैलन्थ्यो मनभित्र आगोका लप्का । अनि पोल्थ्यो भतभती । असह्य बनाएर । चेतना प्रायः शुन्य हुन्थ्यो । रातो रङ्गसँग डराउने भएँ म । रङ्गसँग मात्र कहाँ र ? हरेक चिज डरलाग्दो देखिने कस्तो अचम्मको तन्द्रा बन्यो, पुरै दैनिकी ।
होइन रहेछ म मात्र विधवा । यता हेरे नी विधवा उता हेरे नी विधवा । कुनै उमेरको पावन्दि छैन । थिएन । श्रीमान् नै नभोगेका बाल विधवा पनि देखें । निशब्द भएँ म । झन् कहाली लाग्यो । हेर्दै जाँदा प्रायः कुनै घर छैनन् विधवा नभएको । विधवालाई किन घृणा गर्छन् मान्छेहरु ? अनि यो समाज ? साँचिकै आमालाई घृणा गरेको कि छोरीलाई ? वा आफ्नै दिदीलाई वा बैनीलाई ? वा आफैंलाई ? अर्को प्रश्नले घोच्यो त्यसैगरि । विदुर पनि हुन्छन् । जीवनभरि भलै नबसून् एक्लै । लाञ्छना रहित विदुर । केहि समस्या नै छैन । न रङ्गको समस्या । न आरोप प्रत्यारोपको डर । मुस्किलले एक वर्ष बित्ला । अनि त पुनः हराभरा जिन्दगी । आखिर किन यस्तो विभेद ? गतिलो उत्तर नभएको निरुत्तरित सवाल हो यो ।
भनिन्छ, महिलालाई मात्र एउटा सेक्स टोईको रुपमा हेर्ने चलन चलेको धेरै भएको छैन । पिरीयड हुँदा १७ दिन लुकाउनुपर्ने बाद्यता यहि थियो । छाउपडि प्रथाको बाद्यता पनि यहि थियो । ता कि कोहि कसैको गिद्धे आक्रमणबाट बच्न सकोस् । आखिर त्यो स्थायी उपाय थिएन । क्षणीक समाधान थियो । अबुझ चलन थियो । चेतयुक्त समाधान थिएन । अझसम्म पनि जेठाजुलाई छुन हुन्न भनिन्छ । छुन मात्र कहाँ हो र ? कपाल छोप्नैपर्ने थियो । कहिं कहिं त जेठाजु र ससुराले देख्न पनि निषेध गरिन्थ्यो । घुम्टोभित्र बस्न पथ्र्यो । अझै पर्छ पनि ठाउँ ठाउँमा । यी सबै चलन यौन अपचलन नहोस् भन्ने नै हो । रहेछ पनि । सरल भाषामा भन्दा आफ्ना वरिपरिकासँग जोगाउन गरिएका उपचार विधि । त्यस्तै त होला विधवासँग जोडिएर बनेका सँस्कार र सँस्कृति पनि । रातो लगाउन नहुने किनकि रातो लगाउँदा महिला राम्री देखिन्छे । झन् सृंगार गर्दा त भन्नै परेन ।
पिपासु नजरबाट जोगाउन र विधवा स्वयंको मन वहकिनबाट रोक्न यसो गरेको हुनुपर्छ । मनै हो वहकिन सक्छ । सादा जीवनशैली र सात्वीकी भोजन गर्नुपर्ने पनि यौनसँगै जोडिएको कुरा हो । सभा समारोहमा देख्न नहुने पनि त्यहि भएर हो । धेरै मान्छेका हुलमा धेरै स्वभावका मान्छेहरु भेटिन्छन् । आँखाबाट कोहि मनसम्म पुग्न सक्ने भयो । फेरि मनबाट व्यवहारसम्म पुगे जीवनको डुंगामा हलचल आउन सक्छ । घरका साना साना बाबु नानीको बिचल्ली हुन सक्छ । मन भएका मान्छे र नभएका मान्छेका व्यवहार पनि पृथक हुन्छन् । त्यहाँ जानबाटै बञ्चित गरिदिएपछि त दुर्घटना हुनबाट जोगिने भयो । परपुरुषबाट जोगाउन अशुभ भनिएको हुनुपर्छ सायद विधवालाई । मैले, हामीले धेरै धुरन्धर महापण्डित, पण्डित लगायतकालाई सोधियो यसबारेमा । विभिन्न शास्त्र पनि अध्ययन गरें । त्यस्तो कहिं लेखिएको थिएन । ऐले समाजलाई धेरै पढें । धेरै मान्छेलाई पढें । मन भएका मान्छे र मन नभएका मान्छे अध्ययन गरें । मान्छे मान्छेमा मान्छेको फरक छ । कति भिन्न छ एउटा मान्छे र अर्को मान्छेको दृष्टिकोण र मान्छेको परिभाषा ।
यहि समाजमा रहेका शास्त्रका व्याख्याता भन्छन्, विधवा त पवित्र हुन्छे । त्यति मात्र कहाँ हो र ? एउटी जो कोहि महिला रजस्वला भएपश्चात पवित्र हुन्छे भलै उसले धेरै लोग्ने मान्छेको संगत गरेकै किन नहोस् । महिला र गंगालाई तुलना गरिएको छ । गंगाले विष्टा लगायतका फोहरहरु बगाउँछिन् र पनि मान्छे गंगा स्नान गर्छन् पवित्र मानेर । त्यस्तै एउटी महिला पनि पवित्र हुन्छे । झनै विधवा त एक पुरुषको संसर्ग विना बसेकी हुन्छे, यस अर्थमा पवित्रमा पनि पवित्र हुन्छे । यस्तीलाई देखेमा अशुभ हैन, शुभ मानिन्छ । भारतका केहि स्थानमा विधवालाई सति राण पनि भनिदो रहेछ । यहाँ त्यो शब्दलाई गाली र दुर्वाच्यको रुपमा प्रयोग हुन थाल्यो । अनि सुन्दा नमिठो र क्रुर मानियो । सतिप्रथाको अन्त्यसँगै जो विधवाको रुपमा रहे तिनलाई जिउँदो सतिको रुपमा मानिन्छ । सतिले जे भन्यो, त्यो हुन्छ भन्ने कथन पनि छ । आजकल पनि सुनिन्छ, सतिले सरापेको भनेर । सतिको अर्को नाम साक्षात देवी हो । यो त भयो विधवासँग जोडिएको शुभ वा पवित्रताको कुरा ।
लीली थापा दिदी जो महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । विधवाका क्षेत्रमा ठूलो चेञ्जमेकरै बन्नुभयो । वहाँ भन्नुहुन्छ, लोग्ने हैन, लोग्नेमान्छे हो आवश्यक पर्ने । कुरा गम्भिर छ । वहाँ लगायत ठूला ठूला नाम चलेका विदुषिहरु पनि यहि भन्छन् । साँचो पनि यहि लाग्छ । एउटा अनुशासनमा बाँध्नको लागि परिवार नामको सँस्थाको विकास भयो । जसमा लोग्ने स्वास्नीको नाम दिईयो । त्यसैले भनिएको हुनुपर्छ, विवाह बन्धन । जहाँ निश्चित बन्धन छ । हुन्छ । जो बाँधियो त्यो ठीक भयो, जो बाँधिन सकेन ऊ अनुशासनहिन वा अर्को शब्दमा चरित्रहिन मानिन्छ । अथवा दुर्घटनाको सृजना हुन्छ । हुन त चरित्रका पनि आ आफ्नै व्याख्या हुन्छन् । मैले जानेको त चरित्र भनेको जो कोहि नभएको बेलामा गरिन्छ वा सोचिन्छ त्यहि व्यवहार वा सोचलाई बुझिन्छ । पृथ्वीका हरेक प्राणीको सृष्टिका लागि प्रकृतिले यौन सम्बन्ध रचेको होला । सबै प्राणीमा भाले पोथी हुन्छन् नै । फरक यत्ति हो कि किट पतङ्ग र जनावरको एउटा निश्चित समय वा सिजन हुन्छ । तर चेतनशिल भनिएको मान्छेको भने हुँदैन ।
मान्छे जति छाडा छ, त्यति जनावर वा कुनै प्राणी छैन । समाजमा जति पनि दुर्घटनाहरु र विखण्डन आउँछन्, ती सबै ३ चिजमा जोडिएका छन् । ती ३ चिजमा पैसा, पावर र यौन । जति पनि डिभोर्सका केश छन्, ती प्रत्येक्ष वा अप्रत्येक्ष रुपमा यौन नै हो । त्यसै गरि विधवाको बार बार्न होला सायद यी कथनका सृजना भएका । कसैले नहेरोस् भनेर बिरुप हुन भनिएको । सभा समारोहमा बर्जित गरिएको । राम्रो चिजमा त आँखा जान्छन् नै । राम्रो र मिठो चिजको ग्रहण गर्न सायद सबैलाई मन लाग्छ । के यो स्थायी समाधान हो त ? यो प्रश्न तमाम मनहरुलाई हो । सिङ्गै राज्य र समाजलाई हो । समाजका समान सृष्टि महिला र पुरुष । जन्मनेदेखि मर्ने प्रकृया सबै समान हुन्छ । फेरि एउटा लोग्नेको मृत्यू हुनु सामाजिक मान्यता, शुभ अशुभसँग जोडिन्छ । तर एउटा स्वास्नीको मृत्यूलाई यी कुराले छुन्न । यो फरक किन ? केका लागि ? त्यहि यौन मात्र हो कि अरु पनि छ कारण ? समाज धान्ने जिम्मा फगत महिलाकै मात्र भएको देखिन्छ । जुन कुरा धेरै उखान टुक्काले पनि पुष्टि गर्छन् । महिलाले सहिदिनुपर्छ । घर सम्हाल्नुपर्छ । आफैं सम्हालिनुपर्छ । ईज्जत महिलाको मात्र जान्छ । कि ईज्जत महिलाको मात्रै हुन्छ ? मैले बुझेको छैन भनाईको आशय । महिला भनेको सेतो कपडा हो रे । पुरुष रङ्गीन । सेतोमा लागेको दाग जाँदैन । यस्तै यस्तै धेरै भनाई छन् हाम्रो समाजमा । के यी न्यायसंगत छन् त ?
तसर्थ मान्छेको जीवन जन्मदेखि मृत्यू अघिको समय हो । यो लामो जिन्दगीको छोटो यात्रामा भएका असमान व्यवहार आखिर कहिलेसम्म ? युग बित्यो । शताब्दि सकियो । धेरै जीवनले आहुति दिए । जिउँदै जले । अझै जल्दैछन् । तेलको अभावमा निभ्न ठीक्क छन् कति ज्योतिहरु । कति चुपचाप निभे । निभ्नको लागि हावाको झोका पनि चाहिएन । समाज र देश परिवर्तन गर्न आफैं परिवर्तन हुनु जरुरी छ । अरुलाई परिवर्तन भऊ भन्न जति सजिलो छ त्यति नै कठिन छ आफू परिवर्तन हुन । जबसम्म यो दिव्य ज्ञान हाँसिल हुँदैन तब मान्छे साँचो अर्थमा मान्छे बन्न सकिदैन । जुन दिन मान्छे बनिन्छ, त्यो दिन सबै भेदभाव सकिन्छन् । वा भनौं मेटिन्छन् । न रहन्छ ठूलो सानो । हरेक मान्छे विशेष हुन्छ । हरेक जीवन विशिष्ट हुन्छ । शेष रहन्छ अज्ञान र मुर्खता मात्र । यहि विशेषको विशिष्टता पहिचान गरौं । हर अस्तित्वको सम्मान गर्न सिकौं र आफू पनि सम्मानित बनौं